Interspire Inspiring Aghọtara Email Marketing | Martech Zone
Nke a bụ ọkwa nkwado. Ndị folks nọ na Interspire na-ewelite ogwe na ngwanrọ na-eweta ọrụ Email na mmelite kachasị ọhụrụ, Interspire Email ahịa.
Gbanye awade a ike na siri ike email ahá »‹ a azá »that mahá» ‹a na-abá» ‹a dá» ‹ka ọnụ ọnụ sava arụnyere version ma ọ bụ dị ka a nnabata web based azịza. Otu ihe dị iche iche pụrụ iche na ụdị kachasị ọhụrụ ha (5.5) bụ nyocha ọhụụ A / B nke ọhụụ.
Onyinye A / B na-achọkarị:
A random nlele wepụtara na gị subscriber ndepụta
Kewaa usoro nlele ahụ n'ime otu ule maka email ọ bụla
A na-eziga mkpọsa email n'otu oge na otu nlele ọ bụla
Zigara ndị fọdụrụ na nsonaazụ mmeri
Interspire Automates Email A / B Ule
Akụkụ dị omimi nke nyocha nkewa Interspire bụ na sọftụwia ha ga-ezitere ndepụta gị zuru oke na-adabere na nsonaazụ ule A / B gị!
Yana Split Ule na akpaaka, na ọhụrụ ntọhapụ nke ha Email Marketing software gbakwunye atụmatụ ndị a:
achụ - Mepụta ụbọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ, megharia / wepu kọntaktị na / site na ọtụtụ ndepụta dabere na ọ bụrụ na ha emepela email gị ma ọ bụ pịa otu njikọ njikọ na ọtụtụ ndị ọzọ.
Omume osisi - Iji aka banye ihe omume dịka oku ekwentị na nzukọ. Ihe ndekọ akpaghị aka na -emepụta ihe omume maka kọntaktị mgbe ha natara email / autoresponder, mepee email ma ọ bụ pịa njikọ ka gị na ndị otu gị nwee ọhụụ zuru oke n'ime omume ha oge niile, na-eme ka ị bụrụ onye na-ere ahịa karịa.
Adịbeghị anya ọrụ log - Ihe ndị enwetara na nso nso a (kọntaktị, ndepụta, mkpọsa, wdg) dị mgbe niile n'ofe ihuenyo na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịlaghachi ebe ị hapụrụ.
Kpọtụrụ ndepụta aha - Jiri nchekwa na ikpuru-na-dobe idozi na hazie kọntaktị gị anatara n'ime gh otu. Ezigbo maka ndị na-ere ahịa email na ọtụtụ ma ọ bụ ọtụtụ narị ndepụta.
20 ọhụrụ wuru na-email ndebiri - Onwere ụdị ọhụụ ọhụụ na atụmatụ ndị dabara n ’ụlọ ahịa ịntanetị ịzụ ahịa Interspire gị. Ugbu a ụlọ ahịa gị na mgbasa ozi email nwere ike ịkekọrịta otu ụdị mgbanwe.
Y’oburu n’acho iwekota onu ahia ahia email na ngwa gi, Email Ahịa nke Interspire nwekwara nnọọ siri ike API REST dabeere. Akwụkwọ ha gụnyere ọtụtụ koodu nlele PHP!